မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ မိုးစက်ဝိုင် - Cele Platform
ပရိသတ်ကြီးရေ….”Miss Universe Myanmar 2013″ ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်ကိုအထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဖူးထင်ပါတယ်နော်…။ သူမဟာဆိုရင် “နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်တစ်ဦးအဖြစ် အနုပညာလောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး” အခုလက်ရှိတိုင် အောင်မြင်မှုများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ…။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ သူမဟာဆိုရင် ” Myanmar’s Heart – မြန်မာ့နှလုံးသား” ဆိုတဲ့ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ထားသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်…။
မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဆိုရင်တော့ photo shooting၊ ကြော်ငြာမဂ္ဂဇင်းတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်…။ လူသားတိုင်းအပေါ် ရိုးသားဖြူစင်စွာချစ်ခင်ပေါင်းသင်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူမရဲ့စိတ်ထားအလှဟာလည်း ရိုးရှင်းတဲ့သူမမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အချစ်ရေးဟာတည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ အပန်းဖြေခရီးထွက်လေ့ရှိကာ ကမ်းခြေထက်က ပုံရိပ်လေးတွေဟာဆိုရင်လည်း တစ်ကယ့်ကိုစွဲမက်စေတာပါနော်…။
မိုးစက်ဝိုင်က ခေတ်လူငယ်ပီပီ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများဖြစ်ကြတဲ့ facebook၊ instagram တို့တွင် သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အမျိုးမျိုးကိုအစဉ်အမြဲ ဖော်ပြပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်..။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း “ရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်ပါပြီရှင့် .. ရောက်တာနဲ့ မြန်မာမလေးပြန်ဖြစ်သွားရော .အထူးသတိပြုရန်ကတော့ ဝလာတာမဟုတ်ပါ .. လှလာတာ…ဝတ်စုံလေးကိုအရမ်းကြိုက်လို့ ဒီနေ့တကူတကပုံထရိုက်ရတာ . Shayi ရဲ့ ဒီဇိုင်းလေး..” ဆိုတဲ့ status လေးနဲ့ တကွ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသထားပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…။Myanmarload
ပရိသတျကွီးရေ….”Miss Universe Myanmar 2013″ ဆုရှငျဖွဈတဲ့ မိုးစကျဝိုငျကိုအထူးတလညျမိတျဆကျပေးစရာမလိုဖူးထငျပါတယျနျော…။ သူမဟာဆိုရငျ “နိုငျငံကိုယျစားပွု အလှမယျတဈဦးအဖွဈ အနုပညာလောကထဲသို့ ဝငျရောကျလာတာဖွဈပွီး” အခုလကျရှိတိုငျ အောငျမွငျမှုမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ…။ သရုပျဆောငျပိုငျးမှာလညျး ထူးခြှနျထကျမွတျတဲ့ သူမဟာဆိုရငျ ” Myanmar’s Heart – မွနျမာ့နှလုံးသား” ဆိုတဲ့ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးကို တညျထောငျထားသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ…။
မိုးစကျဝိုငျရဲ့ လတျတလောအနုပညာလှုပျရှားမှုတှဟောဆိုရငျတော့ photo shooting၊ ကွျောငွာမဂ်ဂဇငျးတှကေိုလကျခံရိုကျကူးလကျြရှိပွီး ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲကိုလညျး လကျခံရိုကျကူးလကျြရှိတာဖွဈပါတယျ…။ လူသားတိုငျးအပျေါ ရိုးသားဖွူစငျစှာခဈြခငျပေါငျးသငျးတဲ့ အတှကျကွောငျ့ သူမရဲ့စိတျထားအလှဟာလညျး ရိုးရှငျးတဲ့သူမမကျြနှာပျေါမှာပျေါလှငျနတောဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အခဈြရေးဟာတညျငွိမျလကျြရှိပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ အပနျးဖွခေရီးထှကျလရှေိ့ကာ ကမျးခွထေကျက ပုံရိပျလေးတှဟောဆိုရငျလညျး တဈကယျ့ကိုစှဲမကျစတောပါနျော…။
မိုးစကျဝိုငျက ခတျေလူငယျပီပီ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားဖွဈကွတဲ့ facebook၊ instagram တို့တှငျ သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု၊ အနုပညာလှုပျရှားမှု အမြိုးမြိုးကိုအစဉျအမွဲ ဖျောပွပေးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ..။ အခုတဈခါမှာဆိုရငျလညျး “ရနျကုနျသို့ပွနျရောကျပါပွီရှငျ့ .. ရောကျတာနဲ့ မွနျမာမလေးပွနျဖွဈသှားရော .အထူးသတိပွုရနျကတော့ ဝလာတာမဟုတျပါ .. လှလာတာ…ဝတျစုံလေးကိုအရမျးကွိုကျလို့ ဒီနတေ့ကူတကပုံထရိုကျရတာ . Shayi ရဲ့ ဒီဇိုငျးလေး..” ဆိုတဲ့ status လေးနဲ့ တကှ မွနျမာဝတျစုံလေးတှနေဲ့ ရိုကျကူးထားခဲ့တဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို ထုတျဖျောပွသထားပွီး ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…။Myanmarload